နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: April 2011
"Thin Gyan Moe" Myanmar Classic Movies : သင်္ကြန်မိုး
ပျော်ရွှင်စရာကောင်တဲး့ သင်္ကြန်နှစ်ကူး အခါသမယပါ။
မြန်မာမှန်ရင် သင်္ကြန်ဆိုတာနဲ့ သင်္ကြန်မိုးဇာတ်ကားကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ ၁၉၈၅ လောက်တုန်းက ရိုက်ကူးပြသခဲ့တဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်။
ယူကျူ့ပေါ်မှာ ဦးစန်းအောင် တင်ထားတဲ့ “သင်္ကြန်မိုး” ဇာတ်ကားလေး တွေ့မိလို့ အဝေးရောက် မြန်မာများ သင်္ကြန်အလွမ်းပြေစေရန် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီကားမှာ သုံးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်သီချင်း အများစုဟာ ယခုထက်တိုင် သင်္ကြန်ရာသီချိန်ရောက်တိုင်း တီးမှုတ်နေကြတဲ့ ကလပ်စစ် သင်္ကြန်သီချင်းများ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ရိုက်ကူးခဲ့သူကတော့ ဒါရိုက်တာ မောင်တင်ဦးပါ။
အဲဒီကားထဲက အခန်း အကူးအပြောင်းလေးတွေလဲ လှပါတယ်။
နောက်ဆုံးခန်း ရောက်ခါနီးမှာ သက်ထွေးကို သင်္ကြန်လည်ခွင့် မပေးခဲ့တဲ့ ဖခင် ကိုငြိမ်းမောင်တစ်ယောက် အမြင်မှန်ရပြီး အရက်ပုလင်းကို ရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့အခန်းကနေ သင်္ကြန်မိုး အလှပြယာဉ်ပေါ်က ဒရမ်မာ ဒရမ်ကို ရိုက်ချလိုက်တဲ့ ရိုက်ချက် အခန်းနဲ့ အကူးအပြောင်း လုပ်ထားတာ မိုက်တယ်။ ပညာပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ကြပါလား....
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:28 PM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: movies, Myanmar, Youtube
Photo Credit to : Hnin Wut Yi
ရတတ်သမျှအချိန်တွင် ကောက်သင်းကောက်သလို သူကောက်ချင်သော်လည်း ပွင့်ကြွေများက သူမျှော်လင့်ထားသလို အရေအတွက်များများ ကျမလာခဲ့။
အရင်နေရောင်များများ ရခဲ့သော ကာလက ကောက်သင့်သလောက် မကောက်မိပဲ လေလွင့်သွားသော ပွင့်ကြွေများကို သူမြင်ယောင်မိသည်။
ပွင့်ကြွေတွေ အများကြီး ကျန်နေသေးတယ်ဟု သူ့ကိုယ်သူ ဆင်ခြေပေးခဲ့တာကိုပဲ အပြစ်တင်လေမလား...။
တွေ့သမျှကို တံချူနှင့် ချူလိုက်ချင်သော်လည်း သူ့ချူတံကပဲ တိုလို့လား အပွင့်တွေက မြင့်လွန်းလို့ပဲလား မသိ။ မမှီနိုင် ဖြစ်နေသည်။ တစ်ချို့သော အပွင့်များသည် အလှမ်းမှီသော်လည်း လိုချင်သည့် အချိန်တွင် ချူနိုင်၍ ချန်ထားသည်။
လေနတ်သား နောက်တစ်ချက် အသော့ ပြန်လာသော အခါ အညှာမခိုင်သော အပွင့်တစ်ချို့ကြွေလာပြန်၏။
ကိုယ်လိုချင်သော အပွင့်တစ်ပွင့် ပါလာသည်ကိုတွေ့လေတော့ လက်နှင့် အယမ်း ....
အရှိန်ကြောင့် အောက်သို့ ကျလေသလော....
လေအေးစူးစူးက အောက်မှ ဒလစပ် ပင့်တင် ထိုးခွဲတက်နေသည်ကို ခံစားမိသည်။
တစ်ဟူးဟူး လေသံများသည် နားထဲသို့ အငမ်းမရ တိုးဝင်...
သူအိပ်မက်မှ ဂယောင်ခြောက်ချား လန့်နိုးမိလေသလား...
ပွင့်ကြွေတွေကတော့ ဟိုတစ်ပွင့် ဒီတစ်ပွင့်...
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:14 PM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
သင်္ကြန် အကြို ရာသီစာလေး
ကိုယ့်ဗားရှင်းနဲ့ကိုယ် ပြန်တင်ထားတာကို ဒီနှစ် 2011 အတာနှစ်ကူး အကြိုအနေနဲ့ ဆားချက်လိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:54 PM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ဒီနေ့ စိတ်ပေါက်ပေါက် ရှိတာနဲ့ ရုပ်ရှင်လေးကား ဆက်တိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။
မနက် ၁၁ နာရီကနေ ည ၇ နာရီအထိ။
1. Natali 3D (R21)
2. Rio 3D
1. Natali 3D
ကိုရီးယားကားပါ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့ ယောကျာ်းနှစ်ယောက် နဲ့ ဇာတ်လမ်းဆင်ထားတယ်။ မောင်နဲ့ အစ်မ၊ သားနဲ့ အမိ ကြည့်ရန် မသင့်တော်ပါ။ ဇာတ်လမ်းမယ်မယ်ရရ မရှိပဲ ကိုရီးယား ထုံးစံအတိုင်း ဒဿနဆန်တဲ့ စကားတွေနဲ့ အသည်းယားစရာ ရိုက်ထားပါတယ်။
ကာတွန်းကားလေးပါ။ ရှားပါးမျိုးနွယ်ဝင် Blu အမည်ရ ငှက်ပြာလေးကို နောက်ဆုံးမျိုးဆက် ပျောက်မှာစိုးလို့ တစ်ကောင်တည်းကျန်တဲ့ မျိုးနွယ်တူ အမ ငှက်ကလေးနဲ့ မျိုးပွားအောင် ကြံဆောင်တဲ့ ကားလေး။ ရယ်ရပါတယ်။ သိပ်တော့ မရယ်ရ။ (ဒီ 3D နှစ်ကားစလုံး မစစ်တာလား မသိဘူး။ အရုပ်တွေ ၂ထပ် ထပ်နေတယ်။)
သူကတော့ အက်ရှင်ကား တစ်ကားပဲ။ ဒီမင်းသားက Hang Over မှာ ပါသေးလား မသိဘူး။ ဒီကားမှာတော့ ထုံထိုင်းထိုင်း စာရေးဆရာ တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတယ်။ ၉ နှစ်ကြာ မတွေ့ဖြစ်တဲ့ ညီမရဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ပြန်တွေ့မိရာက NZT ဆိုတဲ့ ဆေးကိုစားမိတဲ့နောက် ဦးနှောက်ဉာဏ်ရည်တွေ ပွင့်သွားပြီး ထက်ထက်မြက်မြက် ဖြစ်လာတာ၊ နောက်တော့ အန္တရာယ်တွေနဲ့ တွေ့တာ... ပြန်ဖြေရှင်းတာ ဘာညာ... အက်ရှင်ကား ကြိုက်သူများ အကြိုက်တွေ့နိုင်မယ့် ကားလေးပါ။
သည်ရော့ခ်မင်းသား ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကြမ်း ဒရာမာကား။ အက်ရှင် သိပ်မပါ.. ဇာတ်အလယ်ပိုင်း ရောက်တဲ့အထိ အီလေးလေးကြီး ဖြစ်နေတုန်း။ နောက်ဆုံးအပိုင်းလေးက လှည့်ကွက်လေး ကောင်းတယ်။ မဆိုးဘူး။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:15 AM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Google New Features Rolling Out!
နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မရေးဖြစ်သည်မှာ ကြာပြီ။
မနေ့ကမှ ဂူဂယ်က Google PlusOne ဆိုသော လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ အောက်က ဗွီဒီယိုတွင် အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်က ဘယ်လို လုပ်ပေးသည်ကို ရှင်းပြထားပါသည်။ အသေးစိတ် သိလိုပါမူ ဤလင့်ခ် ကို နှိပ်ပါ။
နောက်တစ်ခုမှာ ဂူဂယ်ကပဲင် ယနေ့မှ ထုတ်လုပ်လိုက်သော Gmail Motion ပင် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်မှာတော့ Motion Detection Method ကို အသုံးပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မနေ့က ထုတ်တဲ့ +1 application ထက်တော့ ပိုသာပါလိမ့်မည်။ ဘီတာဗားရှင်းဆိုတော့ လိုအပ်ချက်များ ရှိကောင်းရှိနိုင်မည်။ ဘီတာဗားရှင်းအနေနှင့် မဆိုးဟု သတ်မှတ်ရမည်။ ဂူဂယ်ဆိုတော့လည်း ကောင်းသထက် ကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်မည် ထင်ပါသည်။
(စကားမစပ် အထက်ပါ ဗွီဒီယိုမှ ပြောဆိုရှင်းလင်းချက်များသည် သာမာန်သူများနားလည်နိုင်စေရန် American English Accent ကို သုံးနှုန်းထားသည်။ သရုပ်ပြမှုကို လုပ်ဆောင်ပြသော သူသာ အမျိုးသမီးဖြစ်လျင် ပိုကောင်းမည်။ သူပြတာ သိပ်မရှင်း။ ထို့ကြောင့် ကနဦးပိုင်း၌ သူပြထားသည့်အတိုင်း လိုက်လံ လုပ်ဆောင်ကြည့်လျင် အဆိုပါ function သည် ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်ချေ။ သတိထားရန်မှာ WebCam ကို အောက်က ပုံပါအတိုင်း ကိုက်ညီစွာ ချိန်ညှိရမည် ဖြစ်သည်။)
အကယ်၍ ဒီထက်ပိုပြီး လှုပ်ရှားမှုများကို တိကျစွာ ဖမ်းယူပေးနိုင်လျင် စာရိုက်ရ၍ လက်ကောက်ဝတ်များ နာကျင်မှုကို တားဆီးပေးနိုင်မည် ထင်ပါသည်။ XBox Kinect ထုတ်တဲ့ Microsoft ဆီက နည်းပညာကို သုံးလျင် ပိုကောင်းမည်။
ဆိုနီရဲ့ PS3 က Motion Sensor Detection နည်းပညာလည်း မဆိုး။ ခက်တာက ဆိုနီက လက်ရှိ လပ်ပ်တော့ပ်က WebCam ကို သုံးလို့မရတာပဲ။ Gmail Motion ကတော့ မ်ိမိတို့ရဲ့ လပ်ပ်တော့ပ် WebCam သည် Resolution အနိမ့်ဆုံး ၄၈၀ ရှိရင်တောင်မှ Detect လုပ်နိုင်သည်တဲ့။ ခြုံပြောရလျင်တော့ ဤနည်းပညာသည် လက်ချောင်းအဆစ်ရောင်တတ်သူများ အတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ် ထင်တာပဲ။
လောလောဆယ်တော့ Posting Gesture များကို မှတ်သားထားရတာ အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်နေသည်။ နောင်ဆို အလိုအလျောက် ဖြစ်သွားမှာပါပဲ။
Apple ကတော့ iMotion ဆိုပြီး Google နောက် လိုက်ထုတ်မလား မပြောတတ်။ (စတိဗ်ဂျော့ဘ် ကတော့ ဉာဏ်များတတ်သည်။)
Activate လုပ်ဖို့ကတော့ အောက်ကလိပ်စာမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဂျီမေးလ် အကောင့်နဲ့ လင့်ခ်နိုင်ပါပြီ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:20 PM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: April Fool, Funny, Google, Joke
"Thin Gyan Moe" Myanmar Classic Movies : သင်္ကြန်မို...